ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): Syphilis ကာလသား ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လို ကုရလဲ ? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): Syphilis ကာလသား ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လို ကုရလဲ ?
Syphilis ကာလသား ရောဂါဆိုတာ ရောဂါရှိသူ တစ်ဦးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု ကနေ ကူးစက်လေ့ ရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယား ကူးစက် ရောဂါပါ။
Syphilis ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားကို Treponema pallidum လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရောဂါရှိသူရဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ နီးနီး ကပ်ကပ် ထိတွေ့ မိတာမျိုး၊ ယောနိ၊ စအို ဒါမှ မဟုတ် ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံစဉ် အတွင်း ဒါမှမဟုတ် ရောဂါရှိသူနဲ့ လိင်ပစ္စည်း အတု ကို ဝေငှသုံးစွဲတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကူးစက်လေ့ ရှိပါတယ်။
ရောဂါရှိသူနဲ့ အပ်တစ်ချောင်း တည်းကို မျှပြီး သုံးတာက တဆင့်လည်း Syphilis ကာလသားရောဂါ ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်ကတဆင့် မွေးဖွားလာမယ့် ကလေးကို ကူးဆက်နိုင် ပါသေးတယ်။
မကုသဘဲ ထားမယ်ဆိုရင်၊ မိခင်ရော၊ ကလေး အတွက်ပါ ဆိုးဆိုးရွားရွား ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျတာ၊ အသေမွေး တာမျိုး ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာ ဆိုရင် Syphilis ကာလသားရောဂါ ရှိမရှိ သွေးလဲလှယ်မှု အားလုံးကို စစ်ဆေးတဲ့ အတွက်၊ သွေးလဲလှယ်မှု ကနေတဆင့် ကူးစက်တယ် ဆိုတာ တော်တော်လေးကို ရှားပါတယ်။
Syphilis ကာလသားရောဂါဟာ အိမ်သာ တစ်ခုတည်း၊ အဝတ် တစ်ထည်တည်း၊ ရေချိုးခန်း တစ်ခုတည်းကို ရောဂါရှိသူနဲ့ မျှသုံးတာမျိုးမှာ ကူးမစက်နိုင်ပါဘူး။ ဒီ ဘက်တီးရီးယားက လူ့ခန္ဓာကိုယ် အပြင်ဘက်မှာ အချိန်ကြာကြာ မနေနိုင် တာကြောင့်ပါ။
ခပ်စောစော ကုသမယ် ဆိုရင် ဆိုးဆိုးရွားရွား နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ဖို့ အခွင့် အရေး နည်းသွားပါတယ်။ Syphilis ကာလသားရောဂါကို ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုသလေ့ ရှိပါတယ်။
Original link - http://health.thithtoolwin.com/2015/10/syphilis.html
Posted by Te Tee at 10:28 PM